Kacdoonka “Anti Trump”: 3 xaalo oo midkood looga xoroobi karo Donald Trump – Kasmo Newspaper
Kacdoonka “Anti Trump”: 3 xaalo oo midkood looga xoroobi karo Donald Trump
Updated - February 1, 2017 5:43 pm GMT
Dadweynaha Maraykanka ayaa u doortay Donald Trump in uu noqdo Madaxweynihii 45aad, laakiin wax ka yar 2 toddobaad caleemasaarkiisii, dad badan ayaa is weydiinaya sidii looga takhalusi lahaa ka hor doorashada 2020ka.
Wareegtooyinkiisii darandoorriga ahaa ee dhismaha darbiga Mexico, joojinta soo-galootiga Muslimka ah, heshiisyadii ganacsiga, intuba waxay muujinayaan ujeeddooyinkiisa hirgalinta ballanqaadkiisii doorasho. Dadka ka soo horjeeday waxay rajo ka qabeen in uu sidaa dhaami doono, marka uu fariisto Aqalka Cad, laakiin taasi ma dhicin, waxayna ka baaraan dagayaan wadiiqooyinkii loo mari lahaa si looga xoroobo.
Talada ugu horreysa waa in an dib dambe xafiiska loogu dooran, laakiin markii la arkay khasaarihii uu keenay, toddobaadkii u horreeyay xilkiisa, in la sugu 4 sano oo horleh waa muddo aad u dheer.
Taariikhda Amerika oo idil, 1 Madaxweyne oo qur ah, Richard Nixon, ayaa xafiiska ka tagay, isaga oo an muddadii xilkiisa dhammaysan; waxaana la is weydiinayaa, toloow ma jiray Madaxweyne Donald Trump oo kale ah? Wargayska “Foreign Policy” ayaa suuraynaya 3 xaalo oo suuragal ah oo midkood lagu saari karo Donald Trump:
1- Xil ka-qaadis (Impeachment), an ku imaan Karin Congress Jamhuuri u badan
Dastuurka Maraykanku wuxuu qaba in aqlabiyad caadi ah (3 dalool oo 2) Barlamaanku xilka uga qaadi karo Madaxweynaha, sababo ay ka mid yihiin Khiyaamo Qaran, Musuqmaasuq iyo dambiyo kale oo culus.
Yoolbaar ra’yiga dadka laga qaaday “Poll”, toddobaadkii u horreeyay xilkiisa, in ka badan 3 dalool oo 1 meel, dadweynaha Maraykanka waxay jeclaan lahaayeen in ay arkaan isaga oo xilka laga xayuubiyay. Waliba si taasi loo hirgaliyo uma baahna caddeymo dambiyo, laakiin xadgudub kasta oo uu la yimaado waxaa loo tixgalinayaa sabab cuslus oo tillaabadaas looga qaadi karo.
Hase yeeshee Xisbiga Jamhuuriga ee 2da Aqal dhooban ma oggolaanayaan, ilaa ugu yaraan, laga gaarayo doorashooyinka “Mid Term” ee 2018, taas oo laga yaabo in Dimuqraadigu ku guulaysto aqlabiyadda Congress-ka. Tillaabadaas, 2 jeer oo qur ah, taariikhda Amerika ayaa la qaaday: 1868kii Andrew Johnson iyo 1998kii Bill Clinton; labadaba waxaa soo eedeeyay Barlamaanka, waxaase ka badbaadiyay Senate-ka.
2- Qodobka 25aad ee Dastuurka “25th Emendment”.
Rajada dad badan ayaa ku fadhida qodobkaan oo an wax badan laga aqoon, kaas oo qoraya in Madaxweyne ku-xigeenka iyo intooda badan Golaha Fulinta ku caddeyn karaan Madaxweynaha “ mid an gudan Karin waajibaadkiisa shaqo”.
Haddii sidaasi dhacdana, Madaxweyne ku-xigeenka ayaa durba la wareegaya, si ku-meelgaar ah, awoodda iyo waajibaadka xafiiska, waxaana xil ka-qaadista u codeyn doona Congress-ka, sida qodobka 25th qabo. Waana suurtagal in go’aanka Madaxweyne ku-xigeen Pence iyo Xukuumadda oo wada jira ee xil ka-qaadista Trump uu helo taageerada 2da Aqal.
3- Kacdoon Militari ama afgambi.
Oo ah arrin an looga fadhin in ay ka suuragasho Amerika oo militarigeedu ku faano sida uu dhexdhexaadka uga yahay arrimaha siyaasadda dalka.
Waa adagtaya in la arko madaxda Ciidanka oo si cad uga horimaanaysa amar Madaxweyne, waana wax baqdin keeni kara, laakiin sidoo kale waa adagtahay in la arko iyaga oo u hoggaansan awaamiir waalli ah oo caqli gal an ahayn, sida in Nuclear lagu weeraro Shiina, ama Muslimiinta oo idil lagu guro Guantanamo, iwm.
Kolleyba Ciidammadu waxay u dhaarteen badbaadinta Dastuurka ee uma dhaaran Madaxweynaha, qoraaga maqaalkani ayaa is weydiinaysa, in la arko, markii u horreysay, xaalad Saraakiisha Ciidanku ugu jawaabi karaan Madaxweynaha :(No Sir, wer’e not doing that).